OST kwi-PST Converter. Guqula OST ukuya kwi-PST.
DataNumen Exchange Recovery Ingaba i eyona OST PST isiguquli kunye OST isixhobo sokubuyisela emhlabeni. Xa intlekele isenzeka kwi-Microsoft Exchange server, njengokuphazamiseka kweseva, inkohliso yedatha yedatha, njl. DataNumen Exchange Recovery Unokusebenzisa ubuchwephesha obuphambili ukuskena iinkedama okanye ukonakalisa utshintsho kwifolda ngaphandle kweintanethi (.ost) kwiikhompyuter yomthengi, ukufumana imiyalezo kunye nazo zonke izinto zeakhawunti yakho yoTshintshiselwano kangangoko kunokwenzeka, kwaye uziguqulele kwiifayile ze-Outlook pst ukuze zifikeleleke lula.
Phawula: Ukulungiswa kwefayile ye-PST kunye nokufumana kwakhona, nceda usebenzise DataNumen Outlook Repair.
4.90 / 5 (ukusuka kwiivoti ezili-1,619)
Ngoba DataNumen Exchange Recovery?
Ukufumana kwakhona ngaphezulu kwabaKhuphiswano bethu
Inqanaba lokubuyisela kwimeko yesiqhelo yimost Indlela ebalulekileyo ye OST ukuchacha kunye OST kwimveliso yokuguqulwa kwe-PST. Ngokusekwe kuvavanyo lwethu olubanzi, DataNumen Exchange Recovery unelona zinga lifanelekileyo lokuchacha, ibhetele kakhulu kunayo nayiphi na enye into okhuphisana nayo kwintengiso!
Umyinge weRhafu yokuBuyisa
Funda ngakumbi malunga nendlela DataNumen Exchange Recovery utshaya ukhuphiswano
Isoftware yakho yokubuyisa utshintsho iyamangalisa kwaye isebenza njengentshatsheli. Enkosi.
Meyi 9th, 2020
DataNumen Isixhobo sisebenze ngokugqibeleleyo, senza umsebenzi ebendifuna ukuba siwenze. Imveliso + enkosi.
Ndingathanda ukubulela kakhulu ngokwenza ukuba kubenakho ukubuyisa ibhokisi ye-imeyile osele uyiqwalasele lost, kunye neDataNume yokuTshintshiselana ngoTshintsho
Ndingathanda ukubulela kakhulu ngokwenza ukuba kubenakho ukubuyisa ibhokisi ye-imeyile osele uyiqwalasele lost, kunye nesoftware yokuBuyiselwa kweDatha yokuDatha
Ndiyakuvuyela DataNumen Iqela!
NgoFebruwari 16th, 2020
Ndifuna nje ukubulela ngokubonelela ngale nkqubo. Ndiyisebenzise nje ukuguqula ngempumelelo enkulu OST ifayile endivumelayo ukuba ndibuye kwakhona
Ndifuna nje ukubulela ngokubonelela ngale nkqubo. Ndiyisebenzise nje ukuguqula ngempumelelo enkulu OST ifayile endivumelayo ukuba ndifumane ii-imeyile ezili-150 ezilahlekileyo.
Wenze umsebenzi omkhulu, kwaye ndonwabile kakhulu.
Enkosi kakhulu. Ndiyathemba ukuba unguyeost Usuku olugqwesileyo, kunye nempelaveki ebalaseleyo !!
Ngamana 10, 2019
Ngendlela, siluxabisa kakhulu uncedo lwakho. Senze isigqibo sokuthenga Datanumen Exchange Recovery isixhobo izolo, kwaye enye yezinto esisekele kuyo
Ngendlela, siluxabisa kakhulu uncedo lwakho. Senze isigqibo sokuthenga Datanumen Exchange Recovery Isixhobo izolo, kwaye enye yezinto esisekele kwisigqibo sethu yinkonzo yezobuchwephesha obusinike yona ngelixa sivavanywa.
Esi sixhobo sasiluncedo kakhulu! Ndizamile enye isoftware efanayo kodwa le inamaqhinga okufumana ZONKE i-imeyile zam OST ifayile.
Ngamana 20, 2019
Ndifuna nje ukuthi nina bangcono ...
Uxatyiswa kakhulu! Ngoku ndingafumana ulwazi lwam lwekhalenda kuseto olungelulo OST (yinto ekufanele ubenayo
Uxatyiswa kakhulu! Ngoku ndingafumana ulwazi lwam lwekhalenda kuseto olungelulo OST (bekufanele ukuba ulwazi lwekhalenda lusahlulwe lwaba yipst endaweni yokuba ifakwe kwi ost)
Enkosi kwakhona kwaye ube nosuku oluhle!
Aprili 5, 2019
Ugcina usuku lwam. Nantoni na endiyifunayo-ukuguqula nje 2 OST iifayile. Yinkqubo yakho kuphela eyenza oku. Ndiyabulela kakhulu!
Esi sisiqwenga esikhulu sesoftware. Ifumene eyaphukileyo OST ifayile okokuqala kwaye yavula okokuqala kwi-Outlook 2019. Ndizamile ezinye ezi-3
Esi sisiqwenga esikhulu sesoftware. Ifumene eyaphukileyo OST ifayile okokuqala kwaye yavula okokuqala kwi-Outlook 2019. Ndizamile ezinye iziqwenga ezi-3 zesoftware yokulungisa ngaphandle kwempumelelo kwaye besele ndiza kwamkela iposi yakudala ibiyi lost. Enkosi iimfumba DataNumen! 😊
i-CIO, ngoku ithathe umhlala-phantsi
Julayi 15, 2019
Imveliso yakho ikwenzile konke ebekufanele ukuyenza. Ukufumana kwakhona idatha yam yedatha ye-imeyile indisindisile.
Ndiza kuncoma imveliso yakho kuye nakubani na ofuna
Ndicebisa imveliso yakho kuye nakubani na oyifunayo, kwaye ngokuqinisekileyo ukuba ndiyayifuna, ndiza kuyifaka kwakhona.
Disemba 26, 2019
Emva kokutshintshwa kwePC yam yobuqu, kuye kwafuneka ndiphinde ndiyisebenzise ngokobuqu ifayile endala ye-UST ndiyiguqulela kwi-PST. Phakathi kwezinto ezininzi ezithambileyo, ndinazo
Emva kokutshintshwa kwePC yam, bekufuneka ndibuyisele ukusetyenziswa kwam kwifayile yakudala ye-UST ndiyiguqulele kwi-PST. Phakathi kwezinto ezininzi ezithambileyo, ndifumene i-DEXR.EXE ehambelana ngqo nenjongo yam. Ngelixa i-UI ijongeka ilula, i-DEXR ikwazile ukubuyisa zonke ii-imeyile zam, abafowunelwa kunye namaqela onxibelelwano angenazimpazamo. Ndihlala engqondweni DATANUMEN yekamva njengereferensi yeBrand yokufumana kwakhona idatha.
Matshi 7, 2020
Emva kweeyure ezili-10 zexesha elisebenzayo lichithwe ukufundisa i-MS ukuba yintoni ingxaki xa ndihlaziya i-Outlook 2010 ukuya kwi-2013 kunye nokuzaliswa kwayo
Emva kweeyure ezili-10 zexesha elisebenzayo lichithwe ukufundisa i-MS ukuba yintoni ingxaki xa ndihlaziya i-Outlook 2010 ukuya kwi-2013 kunye nokuzenzekelayo kwe-mutiple.ost iifayile ndaye ndazincama. xa bendixelele ukuba abanakuyivula eyokuqala.ost ifayile. Ndiye ndafumana umbono oqaqambileyo wokuba ndenze uphando ngokukhawuleza.ost ukuguqulwa kwe-.pst kunye ne-boom-i-3.8GB yedatha ebaluleke kakhulu kum ibuyele ezandleni zam-konke oku emva kwenkxaso ephezulu ye-MS ye-Outlook ithe abanakwenza nto. Ndikude kwikhompyuter ye-geek kodwa xa usazi ngaphezulu kwe-tech support rep kuya kufuneka uqaphele ngokukhawuleza ukuba usengxakini. Iyasebenza...
Umseki weRJ Collins V360
ISan Diego, CA, e-US
Meyi 15th, 2015
Isisombululo sokulandela iimpazamo eziqhelekileyo kunye neengxaki kwi-Exchange OST ifayile
Ukutshintshana okwangoku kwindlela yokubuyisela
Impazamo inokuba ichongiwe kwiFayile
Ifayile ayisiyo Ifayile yeFolda ye-Offline
Ngaphezulu OST Ingxaki yeFayile
Cima izinto zoTshintshiselwano ngempazamo
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen Exchange Recovery v8.5
Inkxaso yoTshintsho 5.0 ukuya ku-2019.
Inkxaso ye-Outlook 97 ukuya ku-2019 kunye ne-Outlook yeOfisi 365.
inkxaso OST iifayile ezenziwe nguTshintshiselwano ngeSync.
Inkxaso yeWindows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / Visa / 7/8 / 8.1 / 10 kunye neWindows Server 2003/2008/2012/2016/2019. Zombini iinkqubo ze-32bit kunye ne-64bit ziyaxhaswa.
Inkxaso yokufumana kwakhona imiyalezo, iifolda, ipheostIikhalenda, ukuqeshwa, izicelo zentlanganiso, abafowunelwa, uluhlu lokuhambisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, iijenali kunye namanqaku kwi OST iifayile. Zonke iipropathi, ezinje ngesihloko, ukuya, ukusuka ku-cc, bcc, umhla, njl njl.
Inkxaso yokufumana kwakhona izinto ezifakiwe, njengomnye umyalezo, i-Excel Worksheets, amaxwebhu eLizwi, njl.
Izinto ezifunyenweyo zigcinwa kwaye ziguqulelwe kwiifayile zakho zobuqu (PST) ezinokufikeleleka ngokulula yiMicrosoft Outlook kunye nezinye iinkonzo ezihambelana neposi.
Inkxaso yokufumana kwakhona izinto ezisusiweyo kwibhokisi yeposi yokutshintsha, kubandakanya imiyalezo yeposi, iifolda, ipheostIikhalenda, ukuqeshwa, izicelo zentlanganiso, abafowunelwa, uluhlu lokuhambisa, imisebenzi, izicelo zomsebenzi, iijenali kunye namanqaku.
Inkxaso yokuguqula OST kwiifayile ze-PST ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Inkxaso yokufumana kwakhona i-2GB engaphezulu OST iifayile.
Inkxaso yokufumana kwakhona OST iifayile ezinkulu njenge-16777216 TB (okt 17179869184 GB).
Inkxaso yokufumana kwakhona iphasiwedi ekhuselweyo OST iifayile, zombini ukubethela okubhaliweyo kunye nokubethela okuphezulu (okanye ukubethela okungcono) kuyaxhaswa. Inkqubo ye- OST ifayile inokufunyanwa nokuba awunalo igama eligqithisiweyo.
Inkxaso yokuvelisa ifayile ye-PST emiselweyo kwifomathi ye-Outlook 97-2002, ifomathi ye-Outlook 2003-2019, kunye ne-Outlook yefomathi yeOfisi 365.
Inkxaso yokufumana kwakhona OST idatha yefayile evela kwiifayile ze-VMWare VMDK (okanye i-Virtual Machine Disk) engonakaliswanga okanye eyonakeleyo (*. vmdk), iifayile ze-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (*. vhd), Iifayile zeAcronis True Image (*. tib), Norton Ghost iifayile (*. gho, * .v2i), iifayile zeWindows NTBackup (*.bkf), Iifayile ze-ISO (*. Iso), iifayile zeDisk (*. Img), iifayile zeCD / DVD (*. Bin), Utywala 120% Iifayile zeFayile zeDisk (MDF) (*. Mdf) kunye neefayile zeNero (*. nrg).
Inkxaso yokulungisa kunye nokuguqula OST iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa kunye nokuguqula ibhetshi ye OST iifayile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye OST iifayile eziza kulungiswa kwikhompyuter yomthengi.
Inkxaso yokugcina ifayile yePST efunyenweyo nakweyiphi na indawo, kubandakanya inethiwekhi eqhotyoshelweyo iidrive ezaziwa yikhompyuter yendawo.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ke unokuyilungisa OST ifayile kunye nemenyu yokuqulathiweyo yeWindows Explorer ngokulula.
Inkxaso yokudonsa kunye nokwehla komsebenzi.
Umgca wenkxaso yomyalelo (i-DOS prompt) iiparitha.
usebenzisa DataNumen Exchange Recovery Ukuguqula OST Kwiifayile ze-PST
Xa intlekele isenzeka kwi-Microsoft Exchange server, njengokuphazamiseka kweseva, inkohliso yedatha yedatha, njl.njl.ost) Iifayile ezikwikhompyuter yomxhasi ziqulathe imiyalezo yeposi kunye nazo zonke ezinye izinto zeakhawunti yakho yePosi yokuTshintsha. Ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuguqula OST iifayile kwiifayile ze-PST ukuze idatha ngaphakathi kweefayile ifikeleleke kwiMicrosoft Outlook.
Ngaphezu koko, xa uhlangabezana neempazamo ezahlukeneyo kunye neengxaki nge OST iifayile, ezinjengokonakala kwedatha, iimpazamo zokuvumelanisa, ukucima ii-imeyile ngempazamo, i-2GB engaphezulu OST ingxaki yefayile, njl., unokuhlala usebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukufumana kwakhona idatha kwi OST iifayile kwaye uziguqulele kwifomathi ye-PST.
Phawula: Ngaphambi kokuguqula i OST ifayile nge DataNumen Exchange Recovery, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokufikelela okanye ziguqule ifayile ye- OST ifayile. Nceda uvale iMicrosoft Outlook.
Khetha OST ifayile ekufuneka iguqulwe:
Ungafaka igalelo OST igama lefayile ngqo okanye ucofe i iqhosha lokukhangela kwaye ukhethe ifayile. Unokucofa kwakhona iqhosha lokufumana OST ifayile eya kuguqulwa kwikhompyuter yendawo.
Ukuba uyazi inguqulelo ye-Outlook yomthombo OST ifayile ukuba ilungiswe, emva koko unokuyikhankanya kwibhokisi yokudibanisa ecaleni kwebhokisi yemithombo yokuhlela ifayile, iifomathi ezinokubakho zi-Outlook 97-2002, i-Outlook 2003-2010, kunye ne-Outlook 2013-2019 / iOfisi 365. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo", emva koko DataNumen Exchange Recovery izakuskena umthombo OST ifayile ukumisela ifomathi yayo ngokuzenzekelayo. Nangona kunjalo, oku kuya kuthatha ixesha elongezelelweyo.
DataNumen Exchange Recovery iya kugcina idatha eguqulweyo njengefayile entsha kwifomathi ye-PST ye-Outlook ukuze usebenzise iMicrosoft Outlook ukuvula kwaye ubone izinto eziguqulweyo. Kwaye ngokungagqibekanga, igama elitsha lefayile ngu-xxxx_recovered.pst, apho i-xxxx ligama lomthombo OST ifayile. Umzekelo, kumthombo OST Umthombo wefayile.ost, Ifayile eguqulweyo emiselweyo iya kuba nguSource_recovered.pst. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
Ungafaka igama lefayile eguqulweyo ngokuthe ngqo okanye ucofe i ukukhangela kwaye ukhethe ifayile eguqulweyo.
Unokukhetha ifomathi yefayile yePST eguqulweyo kwibhokisi yokudibanisa ecaleni kwebhokisi yokuhlela yefayile eguqulweyo, iifomathi ezinokubakho zi-Outlook 97-2002 kunye ne-Outlook 2003-2019 / iOfisi 365. Ukuba ushiya ifomathi njengo "Ukuzimisela ngokuzenzekelayo" DataNumen Exchange Recovery iya kwenza ifayile eguqulweyo ye-PST ehambelana ne-Outlook efakwe kwikhompyuter yendawo.
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Exchange Recovery Ndiza start Ukuguqula ukusuka kumthombo OST ifayile kwifayile ye-PST. Inkqubela phambili yebha
iya kubonisa inkqubela phambili yokuguqula.
Emva kwenkqubo yokuguqula, ukuba nayiphi na idatha inokuguqulwa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yomyalezo ngolu hlobo:
Ngoku unokuvula ifayile ye-PST eguqulweyo ngeMicrosoft Outlook kwaye ubone izinto eziguqulweyo. Nceda qaphela DataNumen Exchange Recovery izakuzama ukubeka izinto eziguqulweyo kwifolda yazo yoqobo. Nangona kunjalo, ukulungiselela i-lost & Izinto ezifunyenweyo, ziya kuphinda zifumaneke kwaye zibekwe kwiifolda ezikhethekileyo ezinje ngeRecovered_Group1, Recovered_Group2, njl.
DataNumen Exchange Recovery 7.8 ikhutshwa nge-10 kaDisemba, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.6 ikhutshwa nge-31 ka-Okthobha ka-2020
DataNumen Exchange Recovery 7.5 ikhutshwa nge-19 ka-Agasti ka-2020
Ukuphucula ujongano lomsebenzisi.
Susa izinto ezingenamsebenzi.
DataNumen Exchange Recovery 7.2 ikhutshwa nge-21 kaJuni, 2020
Ukuphucula ukuhambelana kwinguqulelo engama-64bit.
DataNumen Exchange Recovery 7.1 ikhutshwa nge-8 kaFebruwari, 2020
Ukuphucula ukusebenza kwakhona.
Ukunciphisa imemori esetyenziswa kwinkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
DataNumen Exchange Recovery 6.9 ikhutshwa nge-3 ka-Okthobha ka-2019
Ukuphucula umsebenzi wokukhangela.
DataNumen Exchange Recovery 6.8 ikhutshwa nge-8 kaJulayi, 2019
Ukuphelisa ukungangqinelani kwifayile yePST emiselweyo.
Yenza injini yokubuyisela kwakhona ibhetshi.
Inkxaso yokugcina i-batch log log.
DataNumen Exchange Recovery 6.5 ikhutshwa nge-24 kaJanuwari, 2019
Inkxaso yokuTshintshiselana ngeServer 2019 kunye ne-Outlook 2019.
Susa ngokuzenzekelayo izinto ezingenamsebenzi.
Ukuphucula ukuchaneka kokufumana kwakhona.
DataNumen Exchange Recovery 6.0 ikhutshwa nge-12 kaNovemba ngo-2018
Ukuphucula ukubuyiswa kweefayile ezinkulu.
Ukubonelela ngolawulo ngakumbi kwilog yokubuyisela.
DataNumen Exchange Recovery 5.6 ikhutshwa nge-21 kaSeptemba, 2018
DataNumen Exchange Recovery 5.5 ikhutshwa nge-28 ka-Epreli 2018
Inkxaso yokuTshintshiselana ngeServer 2016, i-Outlook 2016 neOfisi 365.
Ukuphucula ukusebenza kwenguqulelo engama-64.
DataNumen Exchange Recovery 5.0 ikhutshwa nge-29 kaJulayi, 2015
Inkxaso ye-64bit Outlook.
Inkxaso yokufumana kwakhona iziqwengana zedatha ezingasebenziyo.
Inkxaso yokulawula ukuba ngaba ukubuyisa ukususwa, ukufihlwa okanye lost kwaye bafumana izinto.
Inkxaso yokulungisa "Ayikwazi ukuhambisa izinto" impazamo OST iifayile.
DataNumen Exchange Recovery 4.5 ikhutshwa ngoJuni 12, 2014
Inkxaso yokufumana kwakhona i-Outlook 2013 OST iifayile.
DataNumen Exchange Recovery 4.0 ikhutshwa ngo-Epreli 29, 2014
Inkxaso yokufumana kwakhona OST idatha yefayile kwiifayile ze-VMWare VMDK ezingonakaliswanga okanye ezonakalisiweyo (iifayile zeViski eyiVenkile) (* .vmdk), iifayile ze-Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) (* .vhd), Iifayile zeAcronis True Image (* .tib), Norton Ghost iifayile (* .gho, * .v2i), iifayile zeWindows NTBackup (*.bkf), Iifayile ze-ISO (* .iso), iifayile zeDisk (* .img), iifayile zeCD / DVD (* .bin), Utywala 120% Iifayile zeDiskrikhi yeFayile (MDF) (*. Mdf) kunye neefayile zeNero (*. nrg).
DataNumen Exchange Recovery 3.5 ikhutshwa ngoJanuwari 20, 2014
DataNumen Exchange Recovery 3.0 ikhutshwe nge-12 ka-Agasti ka-2010
Ukuphucula ukusebenza kwe-injini yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Ukuphucula ukufunyanwa kwempazamo kunye nendlela yokulungisa.
Ukuphucula inkqubela phambili yokubonisa inkqubela phambili yokubuyisela ngokuchanekileyo.
Inkxaso yeMicrosoft Exchange 2010 kunye ne-Outlook 2010.
DataNumen Exchange Recovery 2.5 ikhutshwa ngo-Matshi 24, 2010
Ukuphucula ukuhambelana kwe-GUI.
DataNumen Exchange Recovery 2.0 ikhutshwa ngo-Disemba 29, 2008
Phinda ubhale isicelo sonke.
Inkxaso yeMicrosoft yeWindows Vista.
Inkxaso yeMicrosoft Outlook 2007 kunye noTshintshiselwano 2007.
Lungisa ibug ekuqhubekeni kwemiyalezo emikhulu.
DataNumen Exchange Recovery 1.1 ikhutshwa nge-10 kaNovemba ka-2006
Xhasa iindlela ezininzi zokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
DataNumen Exchange Recovery 1.0 ikhutshwa nge-1 Januwari 2006
Isixhobo esinamandla sokuphinda siyinkedama okanye sonakalise iMicrosoft yokuTshintsha ngaphandle kweintanethi (.ostiifayile)
Buyisa i-lost Idatha ye-Outlook, kubandakanya ii-imeyile kunye nezinye izinto ezivela kwiidiski eziluhlaza okanye ukuqhuba